I-B Bearna Cottage - I-Airbnb
I-B Bearna Cottage
Clomantagh, County Kilkenny, i-Ireland
I-ifulethi ephelele ibungazwe ngu-Collette
U-Collette Ungumbungazi ovelele
Ukukhansela kwamahhala ngaphambi komhla ka-Okt 17.
Ifulethi elisanda kulungiswa elivulekile elinekamelo lokulala elilodwa elinendawo yokuphumula yangaphandle ehlukile. Uhamba ngemoto imizuzu engu-20 ukusuka edolobheni eliphakathi nendawo lase-Kilkenny nemizuzu engu-10 uma uhamba ngemoto usuka e-M8. Sisekelwe emgwaqweni oyinhloko phakathi kwe-Freshford ne-Urlingford. Indlwana yethu ingakwazi ukuhlalisa abantu abane futhi senza lula izingane ngendlwana yokuhamba nesihlalo esiphakeme-kunikeza umoya ohlanzekile nobungane ukuze ujabulele ikhefu lokuphumula. Sisebasha ku-airbnb kodwa siqinisekile ukuthi singakwazi ukunakekela izidingo zawo wonke umuntu.
Ikhishi lesimanje elinakho konke. Indawo yokuhlala ehlotshiswe kahle. Ishawa nendlu yangasese kanye ne-wc... Igumbi lokulala lihlotshiswe kahle futhi lagqoke izingubo... indawo evulekile yangaphandle enefenisha yengadi nendawo yokosa. Ikamelo lokuhlanza izingubo elihlukile. Indawo yokupaka yangasese. I-Wifi iyatholakala.
ubusuku obungu-7 e- Clomantagh
Umakhelwane othule kakhulu, ukubukeka okuhle kwasemaphandleni nezindawo ezithile ezinhle zokuhamba ngezinyawo. Umzila wokuhamba e-Freshford umzila omuhle wokuhamba kulabo abathanda ukuhamba ngezinyawo. I-Freshford Milenium Park inendawo enhle yepikiniki eceleni komfula i-Neuanna. Kukhona izimakethe ezinkulu, ama-pub, izitolo zekhofi, amasonto kanye nokuvakasha. Kodwa-ke, ukugqanyiswa lapho uvakashela iningizimu-mpumalanga kufanele kube idolobha elimangalisayo lakudala lase-Kilkenny. Ingene emlandweni ngesigodlo sayo esimangalisayo nezingadi, i-Smithwicks Brewery, i-Rothe House nokunye okuningi. Inezinye zezindawo zokudlela ezihamba phambili kuleli zwe. Inezindawo eziningi zokuphuzela utshwala,amakilabhu, izikhungo zokuthenga kanye nezindlela ezinhle zokuhamba ngasemfuleni i-Nore. Sicabanga ukuthi kukhona okuthile lapha okufanela wonke umuntu.
Sicela uzizwe ukhululekile ukuza endlini enkulu uma udinga ukukhuluma nathi noma ungaxhumana nathi ngocingo nganoma yisiphi isikhathi. Uma udinga noma yiziphi izimfuneko ezikhethekile sizokwenza konke okusemandleni ethu ukukusiza.
UCollette Ungumbungazi ovelele